Cuntada: Barnaamijka Shabakaynta Shabakadaha - Talooyin Wanaagsan
Macluumaadka lagu soo bandhigo boggaga intarnetka iyo bogagga intarnetka waxaa kaliya oo la heli karaa iyada oo la adeegsanayo browser. Meelaha intooda badani waxay ku fashilmaan inay bixiyaan waxqabadyo meesha aad ku kaydin karto xogta bartilmaameedka ah ee mashiinkaaga. Xulashada kaliya ee aad u baahan tahay inaad ururiso xogta waa nuqul-dhejinta xogtaada bartilmaameedkaaga, taas oo ah shaqo adag oo waqti badan qaadata.
Taasi waa sababta aad u baahan tahay shabakadda webka si aad u dhamaysato mashaariicdaada. Webka xajinta, oo sidoo kale loo yaqaano goosashada webka, waa farsameyn soo saarista bartilmaameedka-qoraalka iyadoo la adeegsanayo software-ka duubista shabakadda. Barnaamijka shabakada adeegga shabakadda wuxuu ka helayaa macluumaadka bogagga internetka iyo bogagga internetka taas oo macluumaadka la helay lagu badbaadiyey qaabka miiska ama mashiinada deegaankaaga.
Maxay tahay miyir qabadka?
Dareemaha shabakadda xajinta waxay ka caawisaa bilowga inay soo saaraan macluumaadka shabakadda iyo goobaha firfircoon. Octoparse waxay bixisaa tabobarro ku saabsan sida aad u isticmaali karto barnaamijka kaydka shabakada si loo jaro bogagga iyo bogagga shabakadda. Xaalado badan, barnaamijka shabakadda shabakadda waa mid loogu talagalay in lagu shaqeeyo goobo gaar ah ama loo qaabeeyo daalacayaasha.
Dhexdhexaadinta, waxaad ku dari kartaa xogta waxtar leh ee daruurta ama isticmaal mashiinka maxaliga ah. Hase yeeshee, xayeysiiska dariiqa ayaa ku dooday mashiinada maxaliga ah. Qalabka wax lagu duubo iyo keydinta caadiga ah ayaa ah waxyaabaha muhiimka ah ee aad u baahan tahay inaad tixgeliso markaad xoqayso xogta.
octobarse waxay u ogolaataa digiraha webka in ay soo saaraan xogta sadexda nooc ee ay ka mid yihiin:
waxaa laga helaa bilaash internetka. Waxaad isticmaali kartaa qaabka qalabka software-ka si loo xoqo boggaga internetka, URL-yada, iyo liiska bogagga shabakadaha.
Tani waa qaabka ugu caansan ee shabakadaynta. Habka sare ee wax soo saarka xogta waxay ku saleysan tahay URLs, liiska qoraalka, liiska kala duwan, iyo liiska go'an. Habka waxaa loo isticmaali karaa in lagu soo saaro labada bog oo hal iyo dhowr ah.
Dhexdhexaadinta, waxaad xogtaada ku heli doontaa guduud gudahooda. Haddii aad hubineysid barashada bogga shabakadda, waa inaad ku timaadaa sii deynta ee Octoparse 6. 2 version. Xaaladda casriga ah ee Octoparse waxaa lagu bixiyaa bilaash ah shabakadda. Nooca cusub ee la sii daayay wuxuu kuu ogolaanayaa inaad xogta ka hesho internetka miisaska qaabaysan.
Si aad u isticmaasho habka akhri-ga ah Octoparse, ku dhaji URL si aad bogga internetka ee aad doonayso inaad xoqto. Riix badhanka "Smart" oo fiirso sida bogga loo rogo miisaska qaabaysan.
Si loo dhoofiyo xogta isticmaalka Octoparse API, waa inaad leedahay xisaab xirfad leh iyo xogta laga helay wax ka badan hal shaqo oo ku jira daruuraha. Dhammaan inaad sameyso waa helitaanka cinwaanka cinwaanka adigoo quudinaya magacaaga iyo sirtaada sanduuqa raadinta.
Dhexdhexaadin, waxaad si dhakhso ah uga soo saari kartaa xogta jaantusyada HTML iyo xogta u dhoofin qiimayaasha jinsiga.
Xogta la xoqay waxaa loo dhoofin karaa xogta MySQL ama SqlServer.
Octoparse Advanced Features
Barnaamijkan daabacaadda webka wuxuu bixiyaa sifooyin sare oo bilaash ah si loo dhammeeyo isticmaalaha. Tilmaamayaasha waxaa ka mid ah:
Nidaamka caadiga ah
Qalabka IP-ga ah
Octoparse waa barnaamijka shabakadda ee shabakada ee ugu sarreeya oo daabacan xogta bogagga iyo bogagga. Iyadoo loo yaqaan 'Octoparse', waxaad xogtaada ku heli kartaa adiga oo kashaqeynaya daruuraha ama barta shabaqa mashiinkaaga degaankaaga. Soo qaado oo ku rakibo Octoparse on PC si aad u xoqdo goobaha shabakadaha, dukumintiyada, iyo boostada shaqada Source .